Fiarahamiasa amin’ny Sinoa : Mangarahara tanteraka -
AccueilRaharaham-pirenenaFiarahamiasa amin’ny Sinoa : Mangarahara tanteraka
Firenena manankerena indray aorian’i Etazonia. Efa ho 45 taona izay ny fiaraha-miasa teo amin’i Madagasikara sy ny repoblika entim-bahoakan’i Sina. Mbola mitohy izany fiaraha-miasa izany ary vao maika aza miroborobo amin’ny sehatra samihafa. Maro ireo tetikasa mahasoa ny firenena hiarahana amin’ny Sinoa ary samy miezaka mitady ny tombotsoany ny rehetra amin’izany. « Tsy hifanambakana izany fa na samy mitady ny tombotsoany aza ny firenena roa tonta dia anjaran’ny firenentsika no miaro ny tombontsoantsika. Masimandidy isika ao amin’ny fitantanana ny harentsika ary ambony kokoa ny tombotsoan’ny malagasy satria eto no misy ny fitrandrahana », araka ny fanazavan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tahaka ny mpampiasa vola rehetra dia voafehin’ny lalàna manankery ihany koa ny sinoa ary voaresaky ny filoham-pirenena tamin’ny filoha sinoa, Xi Ping izany.
Amin’izao fotoana dia maro ireo mamboly korotana na manao fandemen-tsaina fa fivarotana tanindrazana ny zava-misy amin’izao fotoana. Ohatra noraisin’ny filoham-pirenena ny fitrandrahana volamena any Soamahamanina. « Takona ny anjara masoandron’ireo mponina manantena ny fampandrosoana ny tananany », hoy ihany ny filoham-pirenena. Saika ireo mpanao politika te hiverina eo amin’ny fitondrana no mitady tombotsoa sy manao izay hisian’ny korontana. « Mihevitra izy ireo fa hiandry azy ireo angamba ny fitrandrahana ao Soamahamanina », hoy htrany izy. Tsy izany anefa ny zava-misy eny an-toerana sy ny feom-bahoaka eny ifotony fa tetikasa goavana tahaka ireny no tena ilaina satria sady mahazo asa ny tanora no mandroso ny faritra misy azy. Fanampiana ireo mponina efa nitrandraka volamena hatramin’izay tao Soamahamanina ny fahatongavan’ny Sinoa. « Tsy misy takalony afa-tsy ny tombotsoan’ny kaominina ary hamenoana ny kitapombolam-panjakana ny takalon’ny fitrandrahana. Disoaka ny filazana fa natakalo ny fitrandrahana tao Soamahanina », hoy hatrany ny fanazavan’ny filoham-pirenena.
Maro ny firenena hananganan’ny Sinoa fotodrafitr’asa , ary anisan’ny kely indrindra ny eto Madagasikara. Ankoatra ny fanomezana omen’ny governemanta Sinoa dia maro ny tetikasa hahasoa ny firenena hiarahana amin’izy ireo ka anisan’izany ny fanitanana ny seranam-piaramnidina e ny Ivato, ny « route de la soie », ny « Autoroute » mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina… hanampy ireo efa nataony teo aloha toy ny lalan’ny atody eny Mahitsy…
« Toky no omeko anao, fa tsy hampidi-kizo ny firenena ny filoham-pirenena. Mbola mila mpamatsy vola ny firenena amin’izao, ary voafehin’ny lalàna izy ireny . Ny fialantsika amin’ny fahasahiranana no tanjontsika, fa misy fanaraha-maso entitra atao amin’ireo mpampiasa vola na iza izy na iza» araka ny teny entitra nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.